ကျောင်းမှာသင့်ကလေးကိုကူညီပါ | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
ကျောင်းကစတင်ကာစိတ်လှုပ်ရှားစရာနဲ့ Hard နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျကြောငျးတှငျသင့်ကလေးကိုကူညီပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. သူတို့ကျောင်းဘဝ၌သင်တို့၏သားသမီးတို့ကိုထောကျပံ့သူတို့ကိုအောင်မြင်ဖို့ကူညီဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ.
US မှာကလေးအတော်များများအသင်းများအတွက်အားကစား play. အခြားသူများကကျောင်းမှာအပြီးကလပ်အသင်းသို့မဟုတ်ကစားဂီတ join. သင့်ကလေးကိုမည်သည့်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်ထွက်ရှာမည်. အားကစားဆိုင်ရာကျန်းမာသူတို့ကိုစောင့်ကူညီရန်နှင့်မိတ်ဆွေများစေမည်.
သူတို့ကလေးဖြစ်သည့်အခါကလေးများ daycare စတင်နိုင်ပါသည်. တချို့က daycares နေသောကလေးများယူပါလိမ့်မယ်2လအရွယ်. ကလေးများများသောအားဖြင့်ရှိပါတယ်4သို့မဟုတ်5အသက်အနှစ်ရသောအခါသူတို့သူငယ်တန်းစတင်ရန်. သူတို့သည်အလွန်အကူအညီလိုတဲ့အခါဒီဖြစ်ပါသည်.
US မှာကလေးများနေ့တိုင်းအိမ်စာအချို့ကိုမျိုးရ. သငျသညျညစဉ်ညတိုင်းအနည်းဆုံးနည်းနည်းလုပ်ဖို့သူတို့ကိုအားပေးသင့်တယ်. သင်သည်သူတို့အလုပ်လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုနားမလည်ကြဘူးဆိုပါက, အဲဒီအကြောင်းသင်တို့ကိုပြောပြရန်သူတို့ကိုမေးဖို့. အခါသင်တတ်နိုင်သမျှသူတို့ကိုကူညီပေးဖို့ကြိုးစားပါ.
ဆယ်ကျော်သက်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းခဲယဉ်းသည်! ကျနော်တို့ကအမြဲငါတို့သားသမီးကြီးထွားလာသောအခါအဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုသိရန်နှင့်ပြောင်းလဲမှုပါဘူး. ဤသည်၏သားတို့သည်အသက်အရွယ်နှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောမိခင်များအဘို့အခက်ခဲဆုံးနိုင်ပါတယ် 17 နှင့်အထက်. သင့်ရဲ့ကျောင်းသားအထက်တန်းကျောင်းပျက်ကွက်လျှင်, သူကအတန်းကိုကျော်သွားသို့မဟုတ်လုံးဝကျောင်းကိုစွန့်ခွာစေခြင်းငှါ.
သင်အမှန်တကယ်စိုးရိမ်နေလျှင်, အကူအညီတောငျး. အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မိဘတိုင်ကြားမှုနှင့်အတူ Start. ဒါဟာမှာဖုန်းကိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ခံကြောင်းနှင့်အကြံပေးနိုင်သူလူပေါင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားထားသည် (855) 427-2736, သောကြာနေ့မှတနင်္လာ, 10 နံနက် PST မှ7ညနေ PST. ဒါဟာအစအများအပြားအွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုရှိပါတယ်.
ကျောင်းကိုပြီးအောင်နှင့်သင့် GED ဝင်ငွေ®
အခမဲ့အွန်လိုင်း GED® ပြင်ဆင်မှုသင်တန်း